चार हिमालका लागि चार सय आरोही आधार शिविरमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सल्लेरी । वसन्त ऋतुमा सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि करीब चार सय आरोही नाम्चेबाट उकालो लागेका छन्।
यतिबेला अधिकांश आरोही पर्यटकीय क्षेत्र नाम्चे हुँदै आधार शिविर पुगिसकेका छन्। आजसम्म ४० समूहका आरोही सगरमाथा प्रदूषण तथा नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) नाम्चेमा दर्ता गराएर आधार शिविरतर्फ लागेका हुन्। तीन हिमाल आरोहणका लागि एउटै आधार शिविर प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
तीन सय ८३ आरोही एसपिसिसीको कार्यालय नाम्चेमा नाम दर्ता गराएर आधार शिविरतर्फ गइसकेको एसपिसिसीका कार्यक्रम अधिकृत कपिन्द्र राईले जानकारी दिए।
एसपिसिसीका अनुसार विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि दर्ता गराएका समूहमध्ये ३३ समूहका ३०८ सगरमाथा आरोहण दलका सदस्य छन्। यस्तै ल्होत्से हिमाल आरोहणका लागि छ समूहका ६४ र नुप्त्से हिमाल आरोहणका लागि एक समूहका ११ आरोहण दलका सदस्य रहेको राईले जानकारी दिए।
बीस आरोही महिला
पर्यटन विभागमा अनुमति लिएका आरोहीको तथ्याङ्क हेर्दा सगरमाथा आरोहणका लागि पाँच समूहका ३८ आरोहीदलका सदस्य नाम्चे पुग्न बाँकी छ। पर्यटन विभागमा आजसम्म विदेशका ३४ र नेपाली चार समूहका आरोहीले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३४ समूहका ३२६ विदेशी र चार समूहका २० नेपाली आरोहीले अनुमति लिएका छन्। नेपाली आरोहण दलमा २० मध्ये १५ महिला छन्।
यस्तै आठ हजार ५१६ मिटर उचाइको ल्होत्से हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिनेमध्ये दुई समूहका २४ आरोही नाम्चे पुगेका छैनन्। विभाग र एसपिसिसीको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा सात हजार ८१६ मिटर उचाइको नुप्त्से हिमाल आरोहणका लागि सरकारसँग अनुमति लिएका दुई समूहका २६ जनामध्ये एक समूूहका १५ आरोही आधार शिविरतर्फ जाने क्रममा छन्।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशी पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर तथा नेपालीले प्रतिव्यक्ति नेपाली रु ७५ हजार सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ। विभागमा आरोहीले सलामी दस्तुर बुझाएर अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
ल्होत्से हिमाल आरोहणका लागि विदेशीले सलामी दस्तुरवापत एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ भने नेपाली आरोहीले नेपाली रु १० हजार र नुप्त्से आरोहणका लागि विदेशी आरोहीले प्रतिव्यक्ति ६०० अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्छ। सोही हिमाल आरोहणका लागि नेपाली आरोहीले प्रतिव्यक्ति रु छ हजार सलामी दस्तुर बुझाउँछन्।
सरकारले प्रत्येक आरोहण समूहमा एक सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ। आरोही विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत आरोहणमा जाने गर्छन्। आरोही र सरकारबीच सम्पर्क गराउन विभागले सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको जनाइएको छ। रासस